Nagu saabsan - Vallow Electric Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Teknolojiyada Korontada ee Varlot (Shanghai) Co., Ltd.
Tayada waa adeeg nololeed waa ujeedada Daacadnimo Waligeed
Teknolojiyada Korontada ee Varlot (Shanghai) Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ay ansaxisay oo ay diiwaangeliyeen waaxaha gobolka ee ay khuseyso. Shirkadeenu waa shirkad mas'uuliyad xadidan oo isku dhafan qaybinta, jumlada iyo adeegyada ganacsiga, iyo lamaanaha qeybiyeyaasha muddada-dheer ee Siemens (Shiinaha) kooxda warshadaha dhijitaalka ah.
Waxa aan qabano？
Shirkaddu inta badan waxay u qaybisaa waxyaabaha soo socda ee Siemens: PLC xakamaynta barnaamijka, qalabka wax lagu beddelo, xakamaynta adeegga iyo alaabada wadista, AC servo mootada, is-dhexgalka mashiinka aadanaha iyo shaashadda taabashada, alaabada qaybinta tamarta hooseysa iyo korantada, koontaroolka mootada iyo alaabada ilaalinta, awoodda warshadaha sahayda, mashiinka isweydaarsiga Ethernet-ka, iwm Isla markaa, waxaan sidoo kale iibinnaa abb, Schneider, Omron, Mitsubishi iyo noocyo kale. Shirkaddayadu waxay dhistay xiriir wadashaqeyn wanaagsan oo muddo dheer la leh shirkado badan oo leh raasumaal faro badan iyo xoog farsamo, qiimo mudnaan macquul ah iyo adeeg iib wanaagsan kadib. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa dhammaan macaamiisha inay soo booqdaan, baaraan oo ay gorgortamaan ganacsiga.
Maxaad noo Doortaa？
"Wadaaga shirkadda 'Siemens (China) Digital Industry Group'
"Awood cilmi baaris iyo horumarineed"
- Siemens wuxuu diiradda saarayaa R & D ee faylalka wax soo saarka isgaarsiinta warshadaha oo ay ku jiraan 5G warshadaha iyo xalka amniga macluumaadka macluumaadka shabakadaha warshadaha, oo awood u siinaya iskaashi hufan ee wax soo saarka warshadaha.
"Sahay ku filan ee nidaamka CNC iyo qaybo dayactir ah, qiimo macquul ah oo la doorbido, adeeg aad u wanaagsan kadib iibka"
Teknolojiyada, wax soo saarka iyo tijaabinta
Siemens AG waxaa la aasaasay sanadkii 1847, waana hogaamiye caalami ah oo ka shaqeeya cilmiga korontada iyo elektarooniga, laga soo bilaabo markii uu soo galay Shiinaha sanadkii 1872, Siemens wuxuu si isdaba joog ah u taageerayay horumarka Shiinaha iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad casri ah, xalal sare iyo wax soo saar in ka badan 140 sano, wuxuuna aasaasay hogaaminta booska suuqa Shiinaha oo leh tayo aad u fiican oo lagu kalsoonaan karo, taasoo horseedaysa guulo farsamo iyo raacasho la'aan hagar la'aan hal-abuurnimo.
Varlot waxay taageertaa dijitaalka dhammaan silsiladda qiimaha, taas oo abuureysa tartan joogto ah oo ganacsi oo leh xalal dhammaad illaa dhammaad qiimeyn, la-talin illaa fulin iyo adeegyo ku habboon. Warshadaha geeddi-socodka, oo ay ku jiraan kiimikada, dawooyinka, birta & birta, cuntada & cabitaanka, Varlot Waxay ka caawisaa shirkadda inay ku guuleysato waxqabad hufan, sax ah oo ammaan ah. Iyadoo si fiican loo fahmayo warshadaha, Varlot waxay ka caawisaa macaamiisha inay kor u qaadaan waxsoosaarka iyo waxqabadka, ogaadaan wax soo saarka caqliga leh iyo kor u qaadida kartida..
Sumadda adduunka waxaa taageeray dhaqan shirkadeed. Waxaan si buuxda u fahansanahay in dhaqankeeda shirkadeed kaliya lagu abuuri karo Saameyn, Dhexgal iyo Dhexgal. Horumarka kooxdeena waxaa taageeray qiimaheeda asaasiga ah sanadihii la soo dhaafay -------Daacadnimo, Hal-abuur, Mas'uuliyad, Iskaashi.
Kooxdayadu had iyo jeer waxay u hoggaansamaan mabda'a, u janjeedha dadka, maareynta daacadnimada,
tayada ugu sarreeya, sumcad qiimo leh Daacadnimo ayaa noqotay
isha dhabta ah ee kooxdeena tartanka.
Haysashada ruuxdaas oo kale, waxaan ku qaadnay tallaabo kasta qaab deggan oo adag.
Mas'uuliyaddu waxay qofka u saamaxaysaa inuu yeesho adkeysi.
Kooxdayadu waxay leeyihiin dareen xoogan oo masuuliyadeed iyo hadaf u ah macaamiisha iyo bulshada.
Awoodda masuuliyadda noocaas ah lama arki karo, laakiin waa la dareemi karaa.
Waxay had iyo jeer ahayd xoogga dhaqaajiya horumarka kooxdayada.
Iskaashigu waa isha horumarka
Waxaan ku dadaalaynaa inaan dhisno koox iskaashi
Wada shaqeynta si loo abuuro xaalad guul-guul ah ayaa loo arkaa inay tahay hadaf aad muhiim ugu ah horumarinta shirkadaha
Iyada oo si wax ku ool ah loo fuliyo iskaashiga daacadnimada,
Kooxdayadu waxay ku guuleysteen inay gaaraan isdhexgalka kheyraadka, is-dhammaystirka labada dhinac,
dadka xirfadlayaasha ah ha u siiyaan ciyaar buuxda takhasuskooda
QAAR KA MID AH MACALIMIINTA
SHAQOOYIN CAJIIB AH OO KOOXDEENA KU BIIRAY MACALIMIINTA!
Bandhigga xoogga bandhigga
01 adeegga iibka kahor
-Talooyin weydiin iyo latalin.
Mid ka mid-injineer iibka adeegga farsamada.
Injineer iibka injineer adeegga farsamada.
02 Adeeg kadib
- Qiimaynta qalabka tababarka ee farsamada;
-Ku rakibidda iyo khalad-ka-bixinta dhibaatada;
-Cusboonaysiinta dayactirka iyo hagaajinta;
Dammaanad-hal sano ah.Provide taageero farsamo oo bilaash ah oo dhan-nolosha ee wax soo saarka.
- ilaali nolosha oo dhan la xiriirida macaamiisha, hel ra'yi-celin ku saabsan isticmaalka qalabka oo samee
Tayada Products si joogto ah kaamil ah.